MDC T Yoyambira VaKasukuwere paNyaya yeMasitendi Avari Kuda Kupa Vatsigiri veZanu PF
MDC-T inoti ichatora matanho anosanganisira kuenda kumatare edzimhosva kana gurukota rezvekutongwa kwematunhu, VaSavior Kasukuwere, vakaenderera mberi nemashoko avo ekuti vachapa vechidiki vebato ravo reZanu PF nzvimbo dzekuvakira dzimba muguta reHarare.
Bato reMDC-T rinoti richatora matanho anosanganisira kuenda kumatare edzimhosva neku komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission kana gurukota rezvekutongwa kwematunhu, VaSavior Kasukuwere, vakaenderera mberi nemashoko avo ekuti vachapa vechidiki vebato ravo reZanu PF nzvimbo dzekuvakira dzimba muguta reHarare.
Mutauriri weMDC-T, VaObert Gutu, vanoti guta reHarare rine mitemo inofanirwa kuteverwa mukuwaniswa kwevanhu pekuvakira dzimba, uye kune mazana ezviuru zvevanhu zvakamirira kuwaniswa mikana iyoyo.
“Izvo hatisi kuzozvitambira. Sebato reMDC tichatora matanho akakodzera.Tichaenda kumatare, tinoenda kuHigh Court kuti tione kuti bumbiro remitemo yenyika rateverwa,” VaGutu vanodaro.
Vanoti semaziviro avo, bato reZanu PF harina mari yekuti ringashandisa mukutenga nzvimbo yekuti vechidiki varo vavakire dzimba, zvichireva kuti vachashandisa dzimwe nzira kuunganidza nadzo mari iyi, kana kuti vachashandisa chisimba chezvematongerwo enyika kutorera vanhu minda yavo.
"Zvatiri kunzwa nevanotitaurirawo ndezvekuti Zanu PF haina mari. Inonzi iri kutotadza kubhadhara vashandi vayo, saka kuti izowana mari yekutenga masitendi, haaah, handifungi kuti zvingaita," VaGutu vanoenderera mberi.
Vachitaura kune vechidiki vebato ravo kuMbare mukupera kwesvondo, VaKasukuwere vanonzi vakati vachawanira vechidiki ava nzvimbo dzekuvakira dzimba.
Vanonzi vakatiwo nzvimbo iyi ichagadziridzwa nekambani yeku China pasi pezvibvumirano zvakanyoreranwa pakati pehurumende yeZimbabwe neChina.
Hatina kukwanisa kubata VaKasukuwere kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi.